PC Solid / Corrugated Sheet Extrusion Line - China PC Solid / Corrugated Sheet Extrusion Line mpamatsy, Factory –Jwell
PC Solid / Corrugated Sheet Extrusion tsipika
Sehatra azo ampiharina amin'ny PC Solid Sheet: Zaridaina, toerana fialamboly, haingon-trano ary ny pavilion amin'ny lalantsara; Haingo anatiny sy ivelany ao amin'ny tranobarotra ara-barotra, rindrina ambain'ilay trano an-tanàn-dehibe maoderina; fitoeram-piaramanidina mangarahara, fitaratra eo alohan'ny môtô, ny fiaramanidina, ny lamasinina, ny sambo, ny sambo mpisitrika, ny tafika ary ny ampingan'ny polisy, ny trano heno an-telefaona, ny tsangambaton'ny dokam-barotra, ny dokambarotra momba ny trano fanaovan-jiro, ny làlambe sy ny lalana ambonin'ny tanàna efijery fiarovana fizarazarana.
Takelaka mitafo PC: ny birao mitafo PC dia manana fahamendrehana manohitra ny toetr'andro,fanoherana ny fiantraikany,fandefasana hazavana avo be. Ampiasaina be ao an-tampon-trano izy io ho an'ireo trano fanatobiana entana sy mora fanamboarana, toy ny dobo fitsangantsanganana, kianja fanaovana ski, tranoheva fitsaharana gara sns.
Vokatra hatevin'ny vokatra